Hal-abuurka Outlier Air V3, falanqayn qotodheer | Qalabka Wararka
Miguel Hernández | | Gargaarka, qalabka, General, Reviews
Haddii dhammaan noocyada caanka ah ee ku shukaansanayay dhawaaqa tobannaankii sano ee la soo dhaafay ay ku boodeen bandwagon-ka taleefoonnada gacanta ee Wireless-ka ee True Wireless, kama yaraan karto kiiska Hal abuur leh, shirkad ka mid ahayd inta badan miisaska kombuyuutarrada iyo miisaska carruurnimadeena iyo dhallinyaranimadayada oo leh xidhmooyinkeeda dhawaaqa 2.1 ee waayo-aragnimada warbaahineed ee ugu dhammaystiran.
Nala soo hel teleefannada dhegaha-dhegaha ee TWS oo haddii ay runtii mudan yihiin in la tixgeliyo qiimahooda soo jiidashada leh, miyaad seegaysaa falanqayntayada?
1 Qalabka iyo naqshadeynta: Khatar yar, kalsooni badan
3 Madax-bannaanida iyo joojinta buuqa
4 Wicitaannada iyo la shaqaynta ka-qaybgalayaasha
Qalabka iyo naqshadeynta: Khatar yar, kalsooni badan
Sida xaaladdu tahay dhammaan aaladaha Hal-abuurka, dhismihiisa iyo nashqaddiisuba waxay ina siinaysaa tayo sare oo la dareemo. Isku darka aluminium iyo balaastiig, haa, oo leh dhadhan iftiinka LED-ka oo inta badan isticmaalayaasha dhaqameed ee noocaan ah aysan inta badan wadaagin, laakiin taasi waxay ka farxisaa dadweynaha da'da yar.
Waxaan haynaa sanduuq qaab leydi ah leh, oo leh qaloocyo waaweyn iyo dhumuc weyn. Waxay leedahay nidaamka soo saarista dhinac ah oo hubaal aan ka dhigin kiis ugu cufan ama ugu fudud suuqa, inkasta oo ay ina siinayso dareen adkaysi iyo adkaysi.
Haddii aad jeceshahay iyaga, waxay ku joogaan qiimaha ugu fiican Amazon, kaliya 49,99 euro.
USB-C ilaa USB-A
Pads oo saddex cabbir ah
Tilmaamaha Bilowga Degdegga ah
U adkaysiga dhididka ayaa mahad leh IPX5 shahaadada
Dhanka kale, sameecadaha oo leh giraan weyn oo LED ah oo wargelin ah, waxay ku jiraan dhegta oo leh suufyo cabbirro kala duwan ah oo kiiska lagu soo daray, iyo sidoo kale iftiin aad u yar. Shakhsi ahaan, taleefoonnada dhegta-gudaha maaha kuwa aan jeclahay, laakiin raaxaysigooda iyo isticmaalkooda ayaa ah codka caanka ah.
Si looga faa'iidaysto hawlaha iyo tayada kala duwan ee loo ogol yahay marka la eego taleefoonnada gacanta ee bilaa-waayirka ah, kuwan Creative Outlier V3 waxay leeyihiin tignoolajiyada Bluetooth 5.2, Tani waxay ku kordhinaysaa waafaqid codecyada maqalka ee ugu caansan, SBC ee badeecadaha badankooda iyo AAC alaabooyinka Apple kuwaas oo, sida aad si fiican u taqaan, u mara wabigooda.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay tignoolajiyada Super X-Fi oo u timaada inay dib u abuurto nidaamka dhawaaqa la taaban karo ee meelo ama meelo kala duwan. Beddel kale oo ina xusuusinaya wax badan oo Dolby Atmos ah iyo tignoolajiyada kale ee la midka ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay si weyn uga soo horjeedaa xaqiiqda ah inaysan lahayn aptX codec, wax ay walaalaheed yaryar, Outlier V2, haystaan.
App-ka hal-abuurka leh si loo habeeyo maqalka: macruufka / Android
SXFiApp: macruufka / Android
Taleefannada dhegaha-dhegaha ayaa ka kooban 6-mil mitir nidaamka darawalnimada biocellulose, In kasta oo Hal-abuurku aanu na siin xogta ku saabsan dulqaadka, Hz iyo dB ee ay kuwan Outlier V3 gacanta ku hayaan, marka waa inaan kuu sheegnaa waxa ku saabsan khibradeena kaliya ee shakhsi ahaaneed.
Madax-bannaanida iyo joojinta buuqa
Dhanka madaxbannaanida, kuwaas Outlier Air V3 Waxaa naloo ballan qaaday 10 saacadood oo kharash ah, 40 saacadood oo dib-u-dhigis ah haddii aan xisaabta ku darno saddexda eedeeymaha dheeriga ah ee kiiska dacwadda. Sida cad, xogtan waxaa loo qaatay tixraac ahaan iyadoo la damiyay doorarka dhimista buuqa ee kala duwan. Isticmaalka dhaqameed ee leh qaabka ambient waxaan ku helnaa qiyaastii 7 saacadood oo madax-bannaani ah kharashkiiba.
Qalabku wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka faa'iidaysanno ku dallacaadda wireless-ka ee heerka Qi, inkasta oo aan sidoo kale ku dallaci karno dekedda USB-C ee dhinaca hore ee sanduuqa, halkaas oo aan sidoo kale ku hayno tilmaamayaasha LED ee kala duwan oo loogu talagalay inay na siiyaan macluumaadka ku saabsan madax-bannaanida soo hartay ama xaaladda kharashka.
Iyada oo loo adeegsanayo dalabka Hal abuur leh, Taas oo aan horay uga soo hadalnay, sameecado-gacmeedyadan ayaa noo oggolaanaya inaan isticmaalno laba nooc oo beddela dhawaaqa:
Qaabka jawiga: Qaab noo ogolaanaya inaan kor u qaadno dhawaaqyada qaarkood, gaar ahaan haddii aan dibadda joogno, iyadoo ujeedadu tahay inaanan naga tagin gebi ahaanba "isku-xirnaanta"
Joojinta Buuq Joojinta guud ee buuqa sida aynu u naqaan dhaqan ahaan.
Waxa aanu helnaa hab deegaan ku filan, iyo qaab joojin sanqadh kaas oo lagu ganaaxay baabiin dadban oo aan si xad dhaaf ah u cajiib ahayn.iyo. Waxaan joojinaa maqalka dhawaqyada soo noqnoqda ee yaryar iyo kuwa dhibsada, waa nagu filan, laakiin waanu ka fognahay in aan nafteena ku go'doominno dhawaaqyada sida codadka, albaabbada ama gaadiidka.
Wicitaannada iyo la shaqaynta ka-qaybgalayaasha
Kuwan Outlier Air V3 waxay leeyihiin laba makarafoon oo dhegaha dhegaha ah, Tani waxay noo ogolaaneysaa, marka hore, inaan u isticmaalno si madax-bannaan, taas oo ah, ma haystaan ​​"madax-gacmeedka addoonta", iyo dhinaca kale. Waxay wanaajiyaan wicitaanadayada inta codkeena si fiican loo qabto. Qaybtan si fiican ayay uga soo baxeen, waxaana la maqlayay dhawaaqyada qaylo iyo sawaxan.
Dhankeeda, waxaanu leenahay waafaqid labada Siri iyo Google Assistant, dhib ma leh soo qaadashada dalabaadkayaga. Sidan oo kale, anagoo tixgelinayna inay yihiin taleefoonnada dhegaha-dhegaha oo gebi ahaanba madax-bannaan, waxaan sidoo kale ogaanay inaan la falgeli karno kaaliyeyaasha codka ee aan kor ku soo sheegnay annagoo adeegsanayna mid ka mid ah sameecadaha dhegaha.
Waxaa intaa dheer, Waxay leedahay kontaroolo taabasho oo taxane ah oo la beddeli karo iyada oo loo marayo arjiga Hal-abuurka laftiisa kaas oo sida aad aragteen uu leeyahay door hogaamineed oo cadaalad ah.
Sidan oo kale waxaan ku heleynaa nafteena sida aan ku aragno taleefoonnada gacanta in kasta oo maqnaanshaha codec-ka aptX Waxay bixiyaan mug sare oo wanaagsan, oo leh caddayn dhexda dhawaaqa iyo bass, in kasta oo ay xoog badan yihiin, ha noqdeen kuwo soo duulay, wax loogu mahadceliyo taleefoonnada "ganacsiga" ee ugu badan ee la arkay beryahan.
Si la mid ah, waxaan ku leennahay madax-bannaani gudaha waxa la filayo. In kasta oo aynaan u helin naqshadeeda ama kiis dacwadeed mid soo jiidasho leh, oo aanu helno baajinta qaylada, in kasta oo uu joogo, aanu samaynayn farqi si xad dhaaf ah loo dareemi karo. marka la barbardhigo beddelka kale ee qiimaha la midka ah.
Taleefannada dhegaha-dhegaha ayaa leh qiimo caadi ah oo ah 49,99 euro, xitaa qiimo dhimis ah 10% Amazon iyada oo loo marayo rasiidhkii ugu dambeeyay. Shaki la'aan beddelaad aad u xiiso badan marka loo eego qiimaha lacagta, gaar ahaan tixgelinta kalsoonida hal-abuurka ayaa na siinaya calaamad ahaan.
naqshad aan soo jiidasho lahayn
Aan lahayn aXX
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Hal-abuurka Outlier Air V3, falanqayn qotodheer